Eyda ma la siin karaa khudaar? 9 khudaar iyo miro sun u ah eyda
Bogga ugu weynEeyaha DaryeelEyda ma la siin karaa khudaar? 9 khudaar iyo khudaar oo sun ah...
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 22, 2022 Eeyaha Vets
Eyda ma la siin karaa khudaar?
Ma eeyaha in la quudiyo khudaar karsan?
9-ka ugu sarreeya ee khudaarta iyo miraha sunta u ah eyda
Miraha iyo khudaarta u roon xayawaanka rabaayada ah
Soo bandhigida cuntooyin cusub cuntada xayawaankaaga
Waa maxay sababta aan ugu kabo cuntada xayawaankayga miraha iyo khudaarta?
Waa maxay qayb kamid ah khudaarta iyo khudaarta aan siinayaa xayawaankayga?
Waa kuwee miraha iyo khudaarta waxyeellada u leh caafimaadka xayawaankaaga?
Xayawaankaygu ma xasaasiyad ku leeyahay miro ama khudaar gaar ah?
Ammaan ma tahay inaan eygeyga ku quudiyo khudaarta oo keliya?
Waa maxay khudaartu ay ammaan u tahay eyda si ay u cunaan?
Waa maxay khudradda ay tahay inaad ka fogaato quudinta eeygaaga?
Cunto caafimaad qabta ma u tahay eeyaha?
Ukuntu miyay faa'iido u leeyihiin eeyaha?
Ma ku habboon tahay eeydu inay cunaan maqaarka maqaarka?
Si ka duwan dadka, eeydu waxay cuntada u shiidaan si ka duwan, cunista cuntooyinka aan habboonayn waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo waqti dheer ah iyo, xaaladaha adag, xitaa dhimasho xaaladaha qaarkood.
Eyda, iyagoo omnivores ah, ma laha shuruud gaar ah oo ku saabsan miraha ama khudaarta qayb ka mid ah cuntadooda, laakiin waxay ku raaxaystaan ​​​​miraha ama khudaarta marmar sida daaweyn.
Khudaar kasta oo aad quudiso eygaaga waa in ay ahaataa mid aan la karinin ama la karkarin/oomin iyada oo aan lagu darin saliid, subag, ama dhadhan. Had iyo jeer u jar qaybo qaniinyada le'eg si aad uga hortagto xiiqda oo si dhexdhexaad ah u quudiso, gaar ahaan haddii eygaagu aanu aqoon khudaar daray ah.
Canabka iyo sabiibka.
Yaanyo aan bislaan.
Basasha iyo toonta.
Pips, abuurka iyo dhagxaanta.
Miraha iyo khudaarta ayaa si gaar ah caan ugu ah xawayaanka rabaayada ah ee yaryar, sida bakaylaha, hamsters, iyo doofaarka guinea, sida si fiican loogu yaqaan bulshada xayawaanka. Weligaa ma laguu soo jeediyay dareenkaaga in miraha sida muuska, liinta, iyo canbaha ay dhamaantood wax ku kordhinayaan baahiyaha nafaqo ee eeyga ama bisadaha?
Waxaa laga yaabaa inaad liiskan ka hesho beddelo caafimaad leh oo lagu daweynayo xayawaanka rabaayada ah ee ganacsiga ah, haddii aad isku dayayso inaad yarayso dhexda xayawaankaaga ama aad si fudud u raadinayso beddelka caafimaadka xoolaha ee ganacsiga.
Nasiib wanaag, qaar badan oo ka mid ah miraha iyo khudaarta aan cunno ayaa sidoo kale la quudin karaa eydayada; si kastaba ha ahaatee, kuwa kale waa khatar waana in laga fogaado kharash kasta. Ogow midhaha iyo khudaarta badbaadada u leh inaad siiso xayawaankaaga rabaayada ah, oo ay ku jiraan kuwan soo socda:
AKHRI: Chihuahua iyo Jack Russell Puppy Puppy - Jack Chi (Grooming + Kharash)
Cuntooyinka cusub oo si aan sax ahayn loogu soo geliyo cuntada xayawaankaaga waxa laga yaabaa in ay keento calaamado calool xumo sida matag ama shuban. Ka digtoonow oo keen hal miro ama khudaar cusub markiiba si ay u fududaato in la ogaado isbedel kasta oo ku yimaadda caafimaadkaaga.
Ka fogow cuntooyinkan: Jeeriga waxa uu dhib u geystaa bisadaha iyo eyda, canabka iyo sabiibkuna waxa ay waxyeelo u geystaan ​​kelyaha dadka iyo xoolaha qaarkood.
Miraha loo yaqaan "Citrus", sida liin, liin, bambeelmo, iyo sidoo kale persimmons, waxay abuuri karaan calool xanuun haddii la isticmaalo tiro badan.
Dhammaan midhaha halkan ku taxan ayaa gebi ahaanba ammaan u ah eygaaga ama bisaddaada inay isticmaasho. Miraha, guud ahaan, waxaa ku jira sonkor ka badan khudaarta, natiijaduna, waa in isticmaalkooda lagu xaddidaa xayawaannada cayilan. Kahor intaanad quudin miraha xayawaanka rabaayada ah, si fiican u dhaq oo ka saar wixii lafaha, haragga aan la cuni karin, iniinaha, ama godadka laga yaabo inay sameysteen.
Khudaarta in laga fogaado: Waligaa ha quudin basasha xayawaankaaga ama toonta sababtoo ah waxay waxyeelo u yihiin nooc kasta. Tan waxa ku jira basasha la kariyey iyo kuwa cayriin labadaba, iyo sidoo kale budada basasha.
Kuwani waxay dhaawac u geystaan ​​unugyada dhiigga cas, taas oo ugu dambeyntii keenta inay dilaacaan oo xinjiroodaan. Sunta sidoo kale waxaa laga heli karaa rhubarb iyo boqoshaada duurjoogta ah. Waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso galleyda sababtoo ah waa xasjiyada caadiga ah ee xayawaanka rabaayada ah.
Khudaarta hoos ku taxan ayaa ammaan u ah eygaaga ama bisaddaada inay isticmaasho. Tixgeli uumi ama karkarinta khudaarta cruciferous sida brokoli, cauliflower, iyo kaabajka, maadaama ay aad ugu fududahay dheefshiidka marka habkan loo diyaariyo.
Haddii khudradda aan la nadiifin, bisadaha waxaa lagu quudin karaa cuntada khudradda ilmaha iyada oo aan lahayn basasha ama toonta, taas oo aad uga habboon quudinta khudradda ceeriin.
Basbaaska dawan (cas, cagaar, oranji, jaalle)
Dr. Sarah Nold, dhakhtar xoolaad oo khibrad leh, wuxuu ku siinayaa talooyin ku saabsan sida loo quudiyo khudaarta iyo miraha xayawaankaaga. Waxay la wadaagtaa hagitaan khabiir ah oo ku saabsan sida loogu darayo khudradda iyo khudradda cuntada xayawaankaaga, oo ay ku jiraan miraha iyo khudaarta bixiya faa'iidooyinka caafimaad ee ugu badan iyo waxa la sameeyo haddii aad ka shakido in bisaddaada ama eygaagu ay leeyihiin xasaasiyad cunto.
AKHRI: Hagaha Iibka Cunnada Eyda: Sidee lagu Ogaada waxa ku habboon Eygaaga?
Cuntada xayawaanku waa inay noqotaa mid nafaqo ahaan dheeli tiran, oo aan dufan lahayn, oo da'da ku habboon.
Marka lagu daro khudradda iyo khudradda cuntada xayawaankaaga, waxaad kaa caawin kartaa dammaanad qaadida inay helaan qadar ku filan oo ah nafaqooyinka muhiimka ah, sida fiitamiinnada iyo macdanta, kuwaas oo ka caawin doona inay xoog iyo caafimaad helaan oo kor u qaadaan habdhiska difaaca.
Cuntooyinka fudud ee xayawaanku sidoo kale waxay noqon karaan kalooriyaal badan, markaa miraha iyo khudaarta ayaa beddel wanaagsan sameeya.
Waxaan ku talinayaa in si dhexdhexaad ah loo isticmaalo khudrad kasta, xitaa haddii loo arko inay badbaado tahay.
Intaa waxaa dheer, haddii eeygooda ama bisaddooda uu daweynayo dhakhtarka xoolaha xaalad caafimaad oo hooseeysa, waxaa lagula talinayaa inay booqdaan dhakhtarka xoolaha ka hor intaysan bilaabin miro ama khudaar cusub.
Waqtiyada cuntada, waxaad ku dari kartaa qadar yar oo khudaar ah cuntada caadiga ah ee xayawaankaaga, ama waxaad siin kartaa miraha ama khudaarta cabbirkoodu le'eg yahay digir rabbaabiya sidii cunto fudud oo kaloori yar.
Si kastaba ha ahaatee, iska ilaali inaad si xad dhaaf ah u quudiso midhaha xayawaankaaga sida strawberries, muuska, iyo cananaaska sababtoo ah waxa ku jira sonkorta badan.
Si la mid ah shukulaatada, dhowr miro iyo khudaar ayaa waxyeello u leh bisadaha iyo eyda. Xayawaanka waxaa ku sumooba basasha, toonta, boqoshaada duurjoogta ah, avokado, iyo rhubarb, galleyduna waa xasaasiyad caadi ah.
Intaa waxaa dheer, waa inaad iska ilaalisaa inaad siiso canabka xayawaankaaga rabaayada ah iyo sabiib, sababtoo ah kuwani waxay keeni karaan dhaawac kelyaha ah.
Way fiicnaan lahayd haddii aad had iyo jeer si tartiib tartiib ah u soo geliso cuntooyin cusub cuntada xayawaankaaga si aad uga fogaato arrimaha caloosha.
Quudi xayawaanka yar yar ee khudradda ama khudradda marka hore, oo had iyo jeer soo bandhig hal nooc oo miro ama khudaar ah si ay u sahlanaato go'aaminta isha falcelinta xun.
Galleyda ayaa sidoo kale laga yaabaa walax sababa falcelinta xasaasiyadda ee xayawaanka rabaayada ah, laakiin aad ayey uga yar tahay kuwa kale (ay ku jiraan hilibka lo'da, caanaha, sarreenka, digaaga iyo ukunta eyda). Hilibka lo'da, caanaha, iyo kalluunka ayaa ah cuntooyinka ugu badan ee xasaasiyadda ku leh bisadaha.
Jirrada, shubanka, iyo dhibaatooyinka maqaarka dhamaantood waa calaamadaha xasaasiyadda cuntada; si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaaga xoolaha oo kaliya ayaa awood u leh inuu go'aamiyo in xayawaankaagu uu xasaasiyad ku leeyahay oo uu kugula taliyo habka ugu fiican ee ficilka.
Waa suurtogal eeyaha inay ku noolaadaan cunto khudradeed, jawaabtuna waa haa.
AKHRI: Boston Terrier Chihuahua Mix Dog Temperament, Caafimaadka iyo kharashka
Jidhka maskaxdu waxa uu awood u leeyahay in uu ka rogo waxyaabaha la isku qurxiyo, taas oo ah mashiinnada dhismaha ee rrоtein, dhexda amiinada kale, taas oo macnaheedu yahay in ay u baahan yihiin in ay wax ka qabtaan.
Fibre-cuntada, fiitamiinnada, iyo rotassiumku waxay aad ugu badan yihiin khudaarta sida karootada, digirta, digirta cagaaran, rootiga macaan, iyo faashashka.
Роtаssium aad bay faa'iido u leedahay madadaalada murqaha ee eeyaha, maadada neerfaha, iyo maadada kelyaha. Fiberkoodu waxa uu sidoo kale ka caawin karaa eeyaha si ay u hagaajiyaan dhaqdhaqaaqa mindhicirka caadiga ah. Inta badan fiitamiinnada iyo macdanaha laga helo liin waa fitamiin C.
Caleenku waa xasaasiyad soo noqnoqda waana ka-bax. Caleenta, garliska, boqoshaada duurjoogta ah, avосаdоs, iyo miraha kale iyo khudaarta ayaa sidoo kale halis u ah dib u gurashada.
Way fiicnaan lahayd haddii aad iska ilaaliso in aad siisid rasiisyadaada sababtoo ah waxay u isticmaali karaan dhaawac kelyaha qaarkood.
Raw rоtаtоes, sida tomаtоes, sоntаin solаnine, whiсh is a shemisаl taas oo waxyeelo u leh dhowr nooc oo eeyaha. Heerarka solаnine ee rotаtоes waa la dhimaa marka la koolkooliyo, in kastoo.
Haddii aad go'aansato inaad siiso eeyahaaga cunto, hubi in la dubay ama la dubay iyada oo aan wax maaddooyin kale ah lahayn. Siinta eeyaha xad dhaafka ah waxay u horseedi kartaa cayil iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad.
Ukuntu aad bay u badbaadiyaan eeyaha si ay u cunaan, sidoo kale waxay u yihiin cunto nafaqo leh saaxiibkaa iyo sidoo kale.
Waxay aad ugu badan yihiin rоtein, fatty асids, fiitamiino, iyo aasids dufan leh, kuwaas oo faa'iido u leh caafimaadka eygaaga gudaha iyo dibaddaba.
Maskaxda ku hay in ukuntu ay kaliya u qurux badan tahay sida roodhida laga soo saaray ee ay ka soo jeedaan. Kala hadal dhakhtarkaaga xoolaha ka hor intaanad siin ukunta eeyga.
Jeexjeexyo cusub, oo maqaarka ku jira, ayaa aad loogu talinayaa quudinta. Maqaarka maqaarka waa in aan la quudin eeygaaga, sababtoo ah waxay u keeni kartaa dhibaato halis ah iyaga.
Views Views: 2,768
eydu ma cuni karaan maqaarka tufaaxa
waa baradho u roon eyda
waa maxay khudradda u xun eyda
Waa maxay khudaarta uu cuni karo
article PreviousTalooyin ah in Had iyo jeer niyada lagu hayo Marka Tababarka Eyda 2022
Next articleMuxuu Eeygeygu Albaabka agtiisa u seexdaa? 5 Waxyood Oo Aad Ogtahay